साइट कुराहरु बिना दर्ता
सुझाव मा देश कसरी सुझाव च्याट र के छैन लुक्न
कुराहरु जस्तै व्यवहार गर्न.
याद प्राप्त गर्न कुनै आवश्यकता गर्न कराउँछन्,»मलाई हेर». आफूलाई बारी गर्न चाहेको स्रोत छ । पनि राम्रो परिचय आफैलाई । राख्न प्रयास को जूता मा आफैलाई अन्य मान्छे । जो हुनेछ, तपाईं ध्यान च्याट मा. प्रतिक्षा नगर्नुहोस् जब तपाईं बोल्न यो आशा नभएको भन्न आफैलाई र विशिष्ट मान्छे संग, छैन मा शून्य छ ।
शीर्ष सुझाव मा च्याट गर्न, त्यसपछि यो व्यक्ति तपाईं बताउन सक्छन् मा क्लिक गरेर निक दायाँ क्लिक र चयन गर्न»यो छ जो थाह», आफ्नो डाटा । मान्छे अपलोड गर्ने फोटो सधैं अधिक सराहना गर्दा भन्दा मान्छे को बैठक बिना तस्वीर । सम्पादन तपाईंको जानकारी र एक फोटो अपलोड छ.
तपाईं सधैं प्राप्त गर्न सक्छन् लिंक मा परिवर्तन गर्न मानिसको विचार
साथै, तपाईं गुमाउन छैन निक भने, कसैले उहाँले जस्तै तपाईं (धेरै अक्सर मामला छ), त्यसपछि मान्छे को एक धेरै खर्च गर्न समय व्याख्या गर्न पुरानो मित्र च्याट मा तिनीहरूले एक नयाँ निक, र पुरानो»द्वारा कब्जा एक नीच.».
बालिका भने एक जवान मानिस थियो
केटा दर्तागरिएकोछैन बालिका तपाईं धोखा ।
केही चयन गर्न च्याट यस्तो उपनाम, म एकदम बुझ्दैनन् आफ्नो लिंग. तपाईं एक केटी हो भने, त्यसपछि केटाहरू छैनन् तपाईं संग भेट्न र उपाध्यक्ष प्रतिकूल । यस मामला मा, यो सबै भन्दा राम्रो छ नयाँ निक छ केवल मा राम्रो उहाँलाई लाग्छ ।
यदि तपाईं बदल संग एक»व्यक्तिगत सन्देश»व्यक्तिगत प्रतिक्रिया निक क्लिक सही मा बटन र चयन»निजी सन्देश».
एक ठूलो संख्या (अधिक), बोधक वा अन्य निशान हुन सक्छ मा आफ्नो हटान देखि च्याट. सन्देश मा लेखिएको ठूलो अक्षर वा पत्र संग एक अलग दर्ता, अनुमति छैन । आधिकारिक भाषा को च्याट मा संचार अन्तर्राष्ट्रिय. सन्देश अन्य भाषामा स्वागत छैनन् ।
तपाईं केही कारण लागि नरमाइलो लाग्यो, यो गर्न आवश्यक छैन, सबैलाई सूचित हामी बाहिर छौं च्याट प्लग. मनोरंजन गर्न तपाईं कुनै दायित्व छ ।
एक नियम को रूप मा, यो बालिका आवश्यक च्याट (के तिनीहरूले लिन), र मान्छे (के तिनीहरूले लिन). बुझ्न प्रयास व्यक्ति को अन्य सेक्स ।
सेक्स छैन व्यक्तिगत पत्राचार, उहाँले बिस्तर मा छ ।
कसरी गर्न एक सन्देश छोड्न गर्ने व्यक्ति तपाईं चैट थियो, तर क्षण मा उपस्थित छैन:»प्रोफाइल र परिमार्जन प्रोफाइल», त्यसपछि आफ्नो प्रोफाइल मा क्लिक»पठाउनुहोस् निजी सन्देश»
← थप परिचय
सबै भन्दा राम्रो "दम्पतीले" डेटिङ साइट — (मुक्त परीक्षा) →